नाम अनुसारको सफलता
बाल्यावस्थामा बुबा आमाले सपना बुन्नुभएको थियो होला छोराले नाम अनुसारको समाजमा इज्जत राखोस् भनेर । काभ्रे जिल्लाको नालामा जन्मिनुभएका प्रा.डा.उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ व्यापारको सिलसिलामा बुबा राजधानी छिरेपछि काठमाडौंको असन नजिकै न्ह्यौखामा हुर्किनुभयो । अनि उहाँलाई अध्ययनका लागि
मुटु लगायत नसर्ने रोगबाट नेपालमा दुई तिहाईको ज्यान जाने गर्छ । एकपटक एकजना हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री एवं शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिका अध्यक्षले गाउँमा पोष्टमार्टम गर्ने डाक्टर नभएको अवस्थामा यो मुटुरोग अस्पताल किन चाहियो ?
किन चाहिन्छ ? स्वास्थ्य बीमा
सडक दुर्घटना, रुख र भिरबाट खसेर लाग्ने जटिल किसिमका चोटपटकको उपचारमा महँगो खर्च लाग्नसक्छ । महँगो खर्च तिर्नसक्ने धेरै व्यक्तिको सामथ्र्य नहुने भएकाले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विगतमा जटिल किसिमका चोटपटको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने वाद्यता
जनस्वास्थ्य सेवा विधेयकमा २९ दफा थप, विदेशमा गरिने उपचारको खर्च राज्यले नव्यहोर्ने
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता लगायत देशका कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषले नव्यहोर्न सर्वसम्मत ‘जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक’ को २९ दफा थप गरी संसदमा पेश गरिएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पेश गरेको सो